Archives des Faits-Divers - Page 1404 sur 1407
Moramanga : Faty feno ratra tao anaty rano
Redaction Midi Madagasikara 21 novembre 2013 anaty rano, Faty, Moramanga
Raha ny fahitana azy dia efa maty taty ivelany izy vao natsipy tanaty rano. Nahitana razana natsingevan’ny rano, tao amin’ny toerana iray fanangonan-dranon’ny Jirama ao Moramanga. Lehilahy tokony ho 23 taona eo izy io. Raha ny fahafantaran’ny olona eo amin’ny manodidina azy dia mpitari-posy no asa fanaony andavan’andro, ary avy any Mantasoa ny fihaviany. Tsy…
Antsirabe : Mpangalatr’omby iray maty voatifitra
Redaction Midi Madagasikara 21 novembre 2013 Antsirabe, Mpangalatr’omby
Na dia nasaina nijanona aza ireo mpangalatr’omby dia mbola lasa nandositra ihany, sady namaly ireo mpitandro filaminana. Voatery nampiasa ny fitaovana teny aminy ireo zandary ka tamin’izany no nahafaty ny iray tamin’ireo jiolahy. Ireo namany kosa afaka nandositra. Ny alin’ny 19 novambra tokony ho tamin’ny 12 ora, nisy andian’olona nangalatra omby tao amin’ny tanànan’Antsoatany Antsirabe.…
Olona telo no indray namoy ny ainy ka zaza 9 volana ny iray, 9 taona ny iray ary vehivavy 20 taona iray. Io no voka-dratsin’ny fihinana fanoara na soka-dranomasina tao amin’ny fokontany Andovokonko, kaominina Ambanivohitry ny Andranovondronina. Omaly no nisian’io tranga io , raha tamin’ny alahady no nihinanan’ny sasany ilay fanoara. Efa roa andro taty…
Asan-jiolahy : Efadahy nanafika ny Telma, lasa ny volabe
Redaction Midi Madagasikara 20 novembre 2013 Asan-jiolahy, Bazary be Toamasina, Telma
Omaly tolakandro tany amin’ny 3 ora, nisy fanafihan-jiolahy niseho teny amin’ny faritry ny Bazary be Toamasina. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa bandy miisa efatra nitondra Scooter no nandroba tao amin’ny “Boutique Telma” Boulevard Joffre. Lasan’ireo olon-dratsy avokoa ny vola rehetra hitany toa miampy telefonina maro. Nitondra basy sy zava-maranitra ireto mpandroba ireto ary dia tsy…
Redaction Midi Madagasikara 20 novembre 2013
# – Ampefiloha. Telo vavy tsy ampy taona nanao ditra. Ny alatsinainy teo, tsy hita ny nalehan’ireo ankizy vavy tsy ampy taona, (eo amin’ny 13 taona eo avokoa). Niezaka nikaroka azy ireo ny havany. Omaly hariva voa niverina tany amin’ny tranony izy ireo. Rehefa nanontaniana dia nilaza fa nampiantranoin’izany ramatoa izany teny amin’ny faritra Anosibe…
Mahajamba Usine : Nahazo vovon-drano fito
Redaction Midi Madagasikara 20 novembre 2013 Mahajamba, Usine, vovon-drano
Fokontany 9 amin’ireo 11 misy ao amin’ny kaominin’i Mahajamba ankehitriny no nahazo vovo famatsiana rano fisotro madio vokatry ny fifanaraham-piaraha-miasan’ny kaominina sy ny ministeran’ny Rano tamin’ny “Agence de l’Eau Seine-et-Marne”, ao amin’ny kaominin’i Paris, Frantsa. Valo taona lasa izay dia nandeha hatrany amin’ny 50km ny mponina no nitatitra rano tamin’ny sarety avy amin’ny reniranon’i Mahajamba.…
Beroroha : Ady lova, vehivavy iray maty voatetika antsy
Redaction Midi Madagasikara 19 novembre 2013 Beroroha, voatetika antsy
Mihabiby ny olona amin’izao ka tsy mifandefitra intsony na dia samy mpihavana izao aza. Ny asabotsy hariva teo dia mpirahavavy niady lova no nifampitetika tamin’ny antsy tany Beroroha. Nandriaka ny rà. Tsy nananany antra fa avy hatrany dia notetitetehany tamin’ilay zavamaranitra ny rahavaviny, maty tsy tra-drano vokatr’izany. Niatomboka tamin’ny fifamaliana momba ity ady lova ity…
← Précédente 1 … 1 403 1 404 1 405 … 1 407 Prochain &arr;